एकै दिन ३० जनासंग – Thulo Khabar - Thulo khabar
एकै दिन ३० जनासंग – Thulo Khabar
त्यो कालकाेठरीबाट त उम्केर आएँ, अब मलाई उसले सजाय पाएको हेर्न मन छ । मलाई नोकरीको झुटो आशा देखाइ कोठीमा पुर्याउनेलाई अब कानुनअनुसार नेपालको कालकोठरीमा पुर्याउनु छ’, आँखाभरि आँसु बनाउँदै क्रोध मिश्रित स्वरमा रानी (नाम परिवर्तन) ले भनिन् ।
रानीले थपिन्, ‘हुन त म के गर्न सक्छु, न त उसको गाउँ थाहा छ, न त उसको वास्तविक नाउँ तर मसँग उसको फोन नम्बर र फोटो छ । यति भए कसो पत्ता नलाग्ला र ?’, नुवाकोट दुप्चेश्वरकी २५ वर्षीया रानी अहिले काठमाण्डौको एक संस्थामा बसेकी छन् । तीन वर्ष दिल्लीको कोठीमा बसेकी उनी गएको जेठ १४ गते कोठीबाटै भागेर नेपाल आएकी छिन् । परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल नामको संस्थाको सहकार्यमा उनी दिल्लीबाट नेपाल फर्कन सफल भएकी हुन् ।
घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, त्यसमाथि धेरै सन्तान । रानीका बुबाआमालाई छोराछोरी पाल्न नै दुःख थियो । रानी १० वर्षकी हुँदा उनका बुबाआमाले काठमाण्डौको असनमा रहेको एउटा घरमा काम गर्न राखे । त्यहाँ उनले बच्चाको हेरचाह, घरको सरसफाइमात्र गर्नु पर्थ्याे । घर मालिकले बस्न र खान राम्रै दिएका थिए ।
रानीले पाँच वर्ष त्यही घरमा काम गरिन् । पढ्ने/लेख्ने समय अरूको घरमा बच्चा खेलाउँदै र घर सफा गर्दै बित्यो । उनी काम गर्ने घर नजिकै होटल थियो । उनी त्यो होटलबाट कहिलेकाहीँ खाजा किनेर खान्थिन् । कहिले खाजा लिन, कहिले त्यत्तिकै फुर्सदमा होटल गइरहन्थिन् । त्यसै क्रममा रानीको भेट नुवाकोटकै केटासँग भयो ।
भेटपछि रानी र त्यो केटाको बोलचाल हुन थाल्यो । रानीसँग मोबाइल थियो । होटलमा भेट भएको केटासँग रानीको मोबाइलमा पनि कुरा हुन थाल्यो । तीन चार महिनाको फोन र भेटघाटपछि रानीले त्यो केटासँग भागी विवाह गरिन् । बिहेपछि रानी श्रीमानसँगै बस्न थालिन् ।
उनको श्रीमान् ज्याला मजदुरी काम गर्थे । बिहेपछि तीन/चार महिना उनीहरू गाउँमा बसे । पछि उनको श्रीमानले राम्रो काम पाउन सकेनन् । त्यसपछि श्रीमानले काठमाण्डौ ल्याए । दुवै जना यतै काम गरी बस्न थाले । बिहे गरेको तीन वर्षपछि रानीको छोरा जन्मियो । श्रीमानले राम्रो काम पाउन सकेनन् ।
कोठामा बस्दा पैसा नहुँदा श्रीमान् रानीसँग झ’र्केर बोल्न थाले । रानीले बच्चा जन्मेको एक वर्षपछि काम खोजिन् । उनले जमलको बुक कारखानामा काम पाइन् । त्यहाँबाट आएको पैसाले रानीको श्रीमानले र ‘क्सी खा’न था’ले । रानीले अर्को काम पनि सुरु गरिन् । बिहान कारखाना र दिउँसो अस्पतालमा सरसफाइको काम गर्थिन् । दुई ठाउँमा काम गर्नुपर्दा रानीको बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म घरबाहिरै रहनुपर्‍याे । रानी काममा जाँदा श्रीमानले श’ङ्का गर्न थाले । त्यसपछि सुरु भयो रानीमाथि घरेलु हिं’सा ।
कहिले र’क्सी खा’एर ‘कु’ट्ने, कहिले पैसा न’दिएको भन्दै कु’ट्ने ग’र्थे । श्रीमानले मा”र्ने ध’म्की पनि दि’न थाले । रानी काममा जान नसक्ने अवस्थामा पुगिन् । यसरी उनको आशा भरोसा टु’ट्न थाल्यो । जीवन अ’न्धकार लाग्न लाग्थ्यो । त्यही क्रममा एकदिन जान्द्रे नामको व्यक्तिले उनलाई फोन गर्‍याे ।
जान्द्रेले उनको फोन नम्बर कसरी पायो उनले थाहा नै पाएनन् । जान्द्रे र रानीको थर एउटै भएकाले उसले भाञ्जी भनेर बोलाउँथ्यो । रानी आफ्नो मनको पिर पोख्न मामा पाएकोमा मख्ख परिन् । केही समयपछि जान्द्रे रानीका श्रीमानसँग कोठामा आउने–जाने पनि गर्न थाल्यो । उनीहरू एकअर्कालाई साथी जस्तै व्यवहार गर्थे । श्रीमानसँग भएको झ’ग’डा जान्द्रेलाई राम्ररी थाहा थियो ।
यसरी पुगिन् दिल्ली
तीन वर्षअघिको कुरा हो, जान्द्रेले रानीलाई श्रीमानको कु’टा’इ सहेर बस्नुभन्दा अर्को काम गर्न सल्लाह दियो । उसले आफैँ राम्रो काम खोजिदिने वाचा गर्‍याे । श्रीमान्को कु’टा’इ’बाट पीडित रानीलाई उसको कुरा सही लाग्यो । ​जान्द्रेले रानीलाई सारीमा बुट्टा भर्ने काम खोजिदिएको बतायो । ‘खान/बस्नसहित राम्रो पैसा दिन्छ, यस्तो श्रीमानसँग बस्नु भन्दा उतै गएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ । म तिमीलाई काम खोजिदिन्छु भन्यो, मैले पनि हुन्छ भनेँ । के थाहा उसले त मलाई दिल्ली पुर्‍याउने योजना बनाएको रहेछ’, रानीले त्यो क्षण सम्झिइन् ।
राम्रो नोकरी भनेपछि रानी मामासँगै गइन् । यो २०७५ साल साउनको अन्तिमतिरको कुरो हो । जान्द्रेले उनलाई स्वयम्भूबाट बसमा चढाए । त्यसपछि कता लग्यो रानीलाई पत्तै भएन । त्यो दिन सम्झँदै रानीले भनिन्, ‘काठमाण्डौभित्रै हो । ठाउँ टाढा छ, गाडीमा जानुपर्छ भन्दै कता लाग्यो थाहै पाइनँ । जानु भन्दा अघि उसले कोक पिउन दिएको थियो । बल्ल भोलि बिहान ९ बजे गाडीबाट झर्‍याैँ ।’
जान्द्रेले बाटोमा पटक–पटक फोनमा कुरा गरिरहन्थ्यो । तर हिन्दी भाषामा के बोल्थ्यो उनलाई थाह भएन । ‘गाडीमा राति सुतेछु, थाहै पाइनँ । बिहान नौ बजे खै कता पो हो । मामालाई सोध्दा अब पुग्दैछौँ भनी भन्यो । आफैँ कुन ठाउँ हो हेरौँ भनेँ तर लेखेको पढ्न जानिनँ’, जान्द्रेले काममा लगाइदिने भनेकाे दिन सम्झँदै रानीले भनिन् ।
रानीलाई कुन सीमा हुँदै भारत लगेको हो भन्ने समेत थाहा छैन । बसबाट झरेपछि रानीलाई अर्को मान्छे आएर मोटरसाइकलमा राखेर खेतैखेतको बाटो लग्यो । ‘के थाहा त्यतिखेर त नेपाल–भारतको सीमा कटाएको रहेछ’, रानीले भनिन् । भारत पसिसकेपछि त्यहाँको भाषा र मान्छे हेर्दा रानीलाई अर्कै लाग्यो । उनी भन्छिन्, ‘टिभीमा देखेको थिएँ । त्यस्तै–त्यस्तै भाषा लाग्यो तर त्यतिखेरसम्म पनि म कहाँ जाँदैछु, यो कुन ठाउँ हो भन्ने थाहा थिएन ।’
काठमाण्डौबाट हिँडेको दुई दिनपछि जान्द्रे र रानी होटलमा बसे । रानीले हातमुख धोएर चिया खाइन् । चिया खाइसक्ने बित्तिकै एउटा महिला आइन् । उनले रानीलाई तिमीलाई काम लगाउने म नै हो भनेर आफ्नो घर लगिन् । त्यो दिन जान्द्रे र रानी त्यही घरमा बसे । पछिल्लो बिहानै महिलाले रानीलाई काममा जान तयार पारिन् । जान्द्रेले तिमी काममा जाऊ म पछि भेट्छु भन्दै घरमा नै बस्यो ।
‘काम सुनेर रोएँ’
रानी जहाँ पुगिन्, त्यहाँ अचम्म देखिन् । ठूलो फल्याट थियो । स–साना केटीहरूदेखि लिएर युवतीहरू बसेका थिए । उनीहरूले लगाएको लुगा, गरेको सिङ्गारपटार अर्कै थियो । उनलाई यस्तो कस्तो काम होला जहाँ चि’टिक्क परेर बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै ती महिलाले रानीलाई पनि तयार हुन लगाइन् । ‘काम गर्न किन यति सिङ्गारपटार गर्नुपर्छ होला भनेर मैले ती महिलालाई सोधेँ– राम्री बनेर गर्ने कस्तो काम हो ? अनि उनले अब तैँले ध’न्दा सुरु गर्नुपर्छ भनिन् । मलाई ध’न्दा भन्ने नै थाहा थिएन । कस्तो, के काम हो भन्ने लाग्यो । पछि थाहा पाएँ मैले त त्यहाँ आउनेसँग यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ’, रानीले भनिन् ।
त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै रानीले त्यस्तो काम गर्दिनँ भनेर रोइकराइ गरिन् । तर जा’लमा परिसकेपछि कसरी उ’म्कन पाइन्थ्यो र ! मन नभइ–नभइ पनि काम गर्न तयार हुनुपर्‍याे । ‘एक हप्तासम्म खाना नखाएरै बसेँ, त्यो काम गर्न तयार भइनँ । शरीर नि’ल’डा’म हुने ग’रेर पि’ट्यो । तँलाई कि’नेर ल्याएको हो, काम नगरेर हुन्छ भन्दै पि’ट्दै मेरै आँखा अगाडि एउटा केटीलाई तीन/चार दिनसम्म खाना खान नदिएर कोठामा थुनेको र मा’रे’र फालेको पनि देखेँ । यो देखेपछि मेरो अगाडि कुनै उपाय नै भएन बा’ध्यताले त्यो काम गर्न स्वीकार गरेँ’, रानीले आफ्नो विवशता सुनाइन् ।
रानीले काम गर्न सुरु गरेपछि मालिकनीले गर्न हुने, नहुने सबै कामबारे बेलिबिस्तार लगाइन् । आफूसँग आएका ग्राहकसँग धेरै नबोल्न, कसैले सोधे आफ्नो इच्छाले आएको भन्न, नेपालको आफ्नो ठेगाना नबताउन भनिन् । यदि कसैलाई सत्य कुरा भन्यो भने जमिनभित्रको कोठामा लगेर कहिल्यै बाहिर नल्याउने चेतावनी पनि दिइन् । ‘मैले यही डरले पनि कसैसँग सत्य कुरा बोल्ने हिम्मत राखिनँ । जो आउँथ्यो तयार हुन पर्थ्याे । मन नभइ–नभइ पनि सबै गर्नु पर्थ्याे । तीन वर्षका हरेक दिन–रात रोएर बाँचेँ’, रानीले कोठीको व्यथा सुनाइन् ।
कोठीमा रात होस् या दिन । जतिबेला ग्राहक आए, त्यति बेला तयार हुनु पर्थ्याे । एकै दिनमा ३० भन्दा धेरैलाई खुसी पार्नु पर्थ्याे । ‘यी कुरा कसरी तपाईँलाई सुनाऔँ, कति पी’डा हुन्थ्यो, सकिनसकी पनि काम गर्नै पर्थ्याे’, रानीले आफूले पाएको दुःख सुनाइन् ।
कालकोठरीका काला दिन
कोठीभित्र के रात के दिन थाहा हुँदैन थियो । बाहिर घाम लागेको छ कि, पानी परिरहेको छ पत्तो हुँदैन । मात्र थाहा हुन्थ्यो ग्राहकको समय । कहिलेकाहीँ यसो झ्यालबाट बाहिर हेर्न खोज्दा मालिकनीले गा’ली गर्थिन् ।
‘बाहिर देख्न पाउने भनेको प्रहरी आउँदा भाग्नुपरे, बिरामी हुँदा अस्पताल जानुपरे मात्र हो । लुगा, सिङ्गारका सामान किन्न पनि व्यापारीहरू भित्रै आउँथे’, रानीले भनिन् ।
दिनहुँ २०/३० जनासँग स’म्प’र्क गर्दा कति पटक बिरामी हुन्थिन् । औ’ष’धी खा’एर, सु’इ’ लगाएर पनि काम गर्नु पर्थ्याे । ‘बेला–बेलामा कोठीमा प्रहरी आउँथे । प्रहरी आएको बेला भा’गाभा’ग हुन्थ्यो । जमिनमुनि पनि कोठा बनाएको हुँदो रहेछ । प्रहरी आएको बेला धेरै पटक हामी त्यहीँ लुक्यौँ’, उनले भनिन् ।
तीन वर्षमा तीन कोठी
पहिलो पटक उनलाई दिल्लीको जीबी रोडको कोठी नं. ५६ मा राखिएको थियो । त्यसको झन्डै एक वर्षपछि उनलाई फेरि जीबी रोडकै ५९ नम्बरको कोठीमा पुर्‍याइयाे । त्यसको एक वर्षपछि फेरि अर्को ठाउँमा पुर्‍याइयाे । पहिलो कोठीमा उनलाई नितुको नाममा बोलाइयो, दोस्रो कोठीमा किन्जल । ‘तेस्रो कोठीमा पनि अर्कै नाम राखेको थियो तर मैले नितु नै भनेँ’, रानीले भनिन्, ‘तीन वर्ष बस्दा मलाई ग्राहकसँगको काम भन्दा पर केही थाहा भएन । कसैसँग बोल्न र कतै जान नपाइने ।’ जति ठाउँमा रानी बसिन्, त्यहाँ धेरैजसो नेपाली केटीहरू र मालिकनी थिए ।
दिनहुँको ध’न्दाले रानी पटक–पटक बिरामी भइन् । बिरामी भए पनि औ’ष’धि खाएर काम गर्नु पर्थ्याे । रानीलाई से’तो पानी ब’ग्ने, पे’ट दु’ख्ने समस्या भयो । पछि बेस्सरी र’ग’त ब’ग्न था’ल्यो । अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा टीबी भएको थाहा भयो । एक दिन रानी अस्पतालमा बसिरहेकी थिइन् । अर्की महिला आएर कुरा गर्न थालिन् । उनी नेपाली बोलेको सुनेपछि रानी पनि बोलिन् ।
चिनजान गर्दै जाँदा रानीले उनलाई आफू बस्ने ठाउँ र गर्ने कामबारे बताइन् । उनले त्यो ठाउँबाट निस्कन चाहेमा आफूले सहयोग गर्ने बताइन् । अनि कसैले थाहा नपाउने गरी मोबाइल किनेर सिम किन्न सुझाव दिइन् । रानीले त्यसै गरिन् ।
ती सहयोगी दाइ
रानीले मोबाइल किनेको कुरा कोठीभित्रै काम गर्ने एक जना केटालाई बताइन् । ती केटाले यो कुरा कसैलाई नभन्न सल्लाह दिए । उनले फेसबुकसमेत खोलिदिए । रानीले फेसबुकमा आफ्नो दाइलाई खोजेर रिक्वेस्ट पठाइदिन ती केटाले नै सहयोग गरे । लगत्तै रानीको दाइसँग सम्पर्क भयो । रानीले आफू समस्यामा परेको बताएपछि नेपालबाट उनका दाइ भारत लिन गए ।
रानीको दाइलाई भारतमा बस्न र भेट गराउन ती नेपाली महिलाले सहयोग गरिन् । नेपालबाट भने परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल संस्थाले रानीका दाइलाई भारत पठाउन सहयोगका लागि दिल्लीमा रहेको संस्थासँग समन्वय गर्‍याे । नेपाली महिला र परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल संस्थाको सहयोगमा रानी गएको जेठ १४ गते त्यो कालकोठरीबाट भा’गे’र नेपाल फर्कन सफल भइन् । तस्विर फाइल
(यो समाचार उज्यालो अनलाइनमा इन्द्रसरा खड्काले लेखेको सामाग्री हामीले साभार गरेका हौ)